आङकाजि शेर्पालाई कालोमोसो दल्नेलाई १ लाख पुरस्कारको घोषणा, कसले गरे यस्तो घोषणा ?
काठमाडौं। संघिय समाजवादी फोरमका नेता आङ्काजी शेर्पालाई जुझारु नेताको रुपमा चिनिन्छ । उनि आदिवासी जनजातीका अभियान्ता समेत हुन् । निक्कै खरो बोल्ने शेर्पालाई यदि कसैले कालोमोसो दले एक लाख रुपैया पुरस्कार दिने एक युवाले घोसणा गरेका छन् ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण साहलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मै पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिरमा थुक्ने कार्यक्रम गर्दै आएका शेर्पालाई कालोमोसो दल्नेलाई पुरस्कार दिने घोषणा टेक राज पनेरुले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत गरेका हुन् ।
पनेरुले फेसबुकमा लेखेका छन्: “रास्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गर्ने कपुत आङ्काजी सेर्पा लाई कालोमोसो दलेर चौपाटे पार्ने सपूत लाई मेरो तर्फबाट रु. १ लाख पुरुस्कार दिने घोषणा गर्दछु।”
राष्ट्र एकीकरण गर्ने बेलामा धोकापूर्ण ढंगले किर्तिपुरका सर्बसाधारणको नाक र कान काटेको इतिहास रहेको छ । त्यसै गरी अन्य जनजातीहरुलाई पनि धोकापूर्ण ढंगले आफ्नो कब्जामा लिदै रास्ट्रको एकीकरण गरेको एतिहासिक दस्तावेजहरु पाइन्छ ।
आदिवासी जनजातीका अगुवा भएको हुनाले आङ काजी शेर्पाले आदिवासीको पक्षमा निक्कै कडा आवाजहरु उठाउदै आएका छन । यसै गरी हरेक पृथ्वीनारायण साहको जन्म जयन्तीलाई कालो दिनको रुपमा मनाउदै आएका जनजातीहरुले पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरलाई थुक्ने कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छन ।
सामाजिक संजाल मार्फत आफ्नो कडा अभिव्यक्ति दिदै आएका आङ काजी शेर्पाको बिरोध गर्नेहरु पनि लाखौमा छन ।
सबै भन्दा ठुलो कुरा पैसा नै रहेछ,छोराछोरीलाई खुवाउनुलाई खाना छैन्,बाच्नलाई पैसा छैन्,दुवै मृगौला संगै मुटुले पनि काम गर्दैन (भिडियो)